SIYAASADDA QARAN EE SHAQO-CARBINTA (2019 HARGEYSA) – SOMRAR ORGANIZATION
Somaliland waa wadan ay dhalinyaraddu ka tahay 70% (boqolkiiba todobaatan). Inkastoo tiro aad u saraysa oo arday ah ay isqoraan waxbarashada sare (sida: Kulliyadaha, Tababarada iyo Waxbarashada Farsamada Gacanta iyo Jaamacadahaba), sidoo kalana kumanaan kale ay ilaa imika qalin-jebiyeen, haddana nasiib darro, tiro kooban ayaa shaqo hela. Tani waxay saameyn ku yeelataa dhalinyaradda taas oo ay niyadjabiso xaqiiqada taala Somaliland. Kuwo badan oo kamidina waxay iskaga tagaan wadanka si ay meel kale uga raadsadaan shaqo wanaagsan amaba waxaabay ku kacaan rabshado si ay u noolaadaan. Sababtan ayaa keentay in dawladda Somaliland mudnaan sare siiso shaqo-abuurka iyadoo u maraysa samaynta siyaasad u qaabaysan dhalinyarada aan horumarinta xirfadahooda iyo helitaanka waxbarasho iyo tababaro tayo leh loo tixgalin siday ahayd. Siyaasaddan Qaran ee Shaqo-carbinta waxaa loo sameeyay in ay hage u noqoto isla markaana taageerto dhalinyarada reer Somaliland ee soo qalin-jebisa, si ay uga helaan fursado meelo ay xirfadooda iyo waaya-aragnimadooda shaqo ku dhisaan ugana faa’idaystaan in aqoontoodii waxbarasho lagu xidho adduunka shaqada, waxaanay taageeraysaa shaqo-abuurka dhalinyaradda iyo horumarka Somaliland. Siyaasaddan Qaran waxaa lagu dabbaqayaa hay’addaha dawladda iyo wadaagayaasha gaarka ah, waxaa sidoo kale loo adeegsanayaa ururrada bulshada ee rayidka ah, Ururrada Samafalka iyo Hay’addaha Qaramada Midoobay, si ay iskula jaanqaadaan siyaasadahoodii shaqaalaha iyo shaqo-baridda, ardayda Somaliland ee aan helin xirfado toos ah iyo aqoontii gaadhsiin lahayd suuqa shaqadana ay albaabka fursadaha ugu furaan. Siyaasaddan waxa laga soo dheegtay sharciyada iyo xayndaabka siyaasadeed ee Somaliland lagaga dhaqmo. Siyaasaddan Qaran ee Shaqo-carbineed waxay dhiiri-galinaysaa in hanaanka shaqobaradka lagu soo xulanayaa ay ahaato mid cadaalad iyo daahfurnaan ku dhisan. Shaqobaradka waxaa lagu soo xulanayaa aqoon, matelaad cadaalad ku dhisan, tixgalin dadka laga tirada badan yahay iyo kuwa la takooro, iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Iyadoo ay sidaa tahay, siyaasaddani waxay si gaar ah u ansixinaysaa dan-wadaag u dhaxeeya xarunta tababarka iyo shaqo-baradka. Ugu danbayntii, Siyaasaddan Qaran ee Shaqo-carbintu waxay leedahay hab cad oo lagu dabagalo isla markaana lagu qiimeeyo hawl-gudashada shaqo-baradka inta lagu gudo jiro shaqo-carbinta. Qorshaha dabagalka iyo qiimaynta waxaa wada hirgalinaya dhammaan daneeyayaasha (Tus. Xarunta tababarka iyo Wasaaradda Shaqo-gelinta, Arrimaha Bulshada iyo Qoyska) si loo hubiyo in shaqo-baradku ay kobcinayaan xirfadooda iyo aqoontooda goobta shaqo. Tani waxay dawladda ka caawinaysaa dedaalka ay ugu jirto sidii loo heli lahaa dhalinyaro xirfad leh iyo hoos u dhigidda shaqo-la’aanta dhalinyarada Somaliland haysata, si loo siiyo fursado ay ku kordhiyaan xirfadooda iyo aqoontooda goobta shaqada, uguna suurto gasho in ay ku tartami karaan shaqo-raadiska.